Shirka Hoggaamiyeyaasha Wadamada G20 ayaa dib u taageeray helitaan caalamiga ah ee ‘loo siman yahay’ ee tallaalka COVID-19. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Shirka Hoggaamiyeyaasha Wadamada G20 ayaa dib u taageeray helitaan caalamiga ah ee...
Shirka Hoggaamiyeyaasha Wadamada G20 ayaa dib u taageeray helitaan caalamiga ah ee ‘loo siman yahay’ ee tallaalka COVID-19.
Hoggaamiyeyaasha 20-ka waddan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa ballan-qaadaya Axadda maanta ah si loo hubiyo in si caddaalad ah loogu qaybiyo tallaallada COVID-19, dawooyinka iyo tijaabooyinka adduunka oo dhan, sida ku xusan war-murtiyeed qabyo ah oo ay soo saareen, si loogu taageero waddamada saboolka ah ee la daalaa dhacaya ka-soo-kabashada cudurka faafa ee coronavirus.
Previous articleRa’iisal wasaare Rooble oo maanta tagaya magaalada Baydhabo.
Next articleGuddoomiyaha Maamulka Gobolka Shabeellada hoose oo maanta booqanaya Degmada Baraawe.